Daawo Sawirada”Warbaahinta Caalamka oo soo bandhigtay meydadka Qaar kamid ah Tahriibayaalkii ay Doonida la rogmatay | Saxil News Network
Daawo Sawirada”Warbaahinta Caalamka oo soo bandhigtay meydadka Qaar kamid ah Tahriibayaalkii ay Doonida la rogmatay
Hay’adda qaxootiga Qaramada Midoobay ayaa sheegeysa in hadda loo maleynayo in ka badan 200 oo muhaajiriin ah ay ku dhinteen badda Meditaraniyanka maalmihii la soo dhaafay iyagoo isku dayay inay ka gudbaan badda.
Qaramada Midoobay ayaa wareysatay dadkii ka soo badbaaday oo ay soo qaadeen ilaalada xeebaha Taylaaniga iyagoo biyaha dulsabeynaya.
Waxay sheegeen in tiro badan oo muhaajiriin ah oo saarnaa doon yar ay qaaday badda kadib markii ay ka soo safreen Libiya. Bishii November Talyaaniga joojiyeen howlgal sanad ahaa oo lagu badbaadinayay muhaajiriinta badda ku safraya.
Hay’adda qaxootiga ayaa ka digtay in go’aankaasi uu keenayo dhimasho badan.
Ugu yaraan rubuc dadka khatarka u badheedhay ee doonaya in ay badda ka gudbaan ayaa la sheegay in aanay ahayn dad dhaqaale doon ah balse waxaa lagu tilmaamay in ay yihiin nolol raadis kasoo cararay colaadaha wadanka Suuriya ka holcaya.